उच्च शिक्षाका लागि विदेशीने विद्यार्थीमाथि अर्थमन्त्रीले थोपरे कर - नेपालबहस
काठमाडौं । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीबाट सरकारले अतिरिक्त दुई प्रतिशत शुल्क लिन लागेकाे छ । विदेश पढ्न जानेको खर्च ४५ अर्बभन्दा धेरै भएकाे भन्दै पढ्नका लागि विदेशीनेकाे संख्यामा कटाैती गर्न यस्ताे व्यवस्ता गर्न लागिएकाे बताए ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क नै गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको अवस्थामा उच्च शिक्षा लिन विदेश जानै पर्ने भन्ने मान्यतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजानुपर्ने बताएका छन् । देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अध्ययन हुने र त्यस्ता विषय पढाउने विश्वविद्यालय र क्याम्पस रहेकाले विदेश जार्नैपर्ने अवस्था क्रमशः अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।
निर्यात अनुदान दिएर आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा विदेसिन नदिन केही न केही गर्नैपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका अभिभावकले कर तिरेको प्रमाणको समेत व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
सांसद जितेन्द्रनारायण देवको विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई दुई प्रतिशत शुल्क किन लिन खोजिएको भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले उक्त जवाफ दिएका हुन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७६ सँग आश्रित तीनवटा विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक विधेयक, २०७६’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७६’ र ‘ऋण तथा जमानत (तेइसौँ संशोधन) विधेयक, २०७६’ लाई पारित गरेको हो ।
यी तीन विधेयक पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाले सोमबार विनियोजन विधेयक, २०७६ पारित गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही आगामी साउन ३ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमित सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि बैठक बुधबार १ बजेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले एक सूचनामार्फत आज १५ मिनेटपछि बस्ने गरी स्थगित बैठक विशेषकारणवश बस्न नसक्ने भएकाले अर्को मिति तय भएको जानकारी दिए ।
त्यसअघि संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सत्तारुढ नेकपा, नेपाली काँग्रेसलगायत दलका प्रमुख सचेतकसँग सभामुख महराले छलफल गरेका थिए । छलफलमा कुनै सहमति नभएपछि बैठक स्थगन भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी, राजपालगायतले सर्लाहीका बालक अनुप रायको पोखरीमा परेर डुबेको घटना र सो घटनालाई लिएर न्याय माग्न गएका स्थानीयवासीमाथि प्रहरीले गोली चलाएको तथा कुमार पौडेलको मुठभेटमा निधनलगायत विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो घटनाका बारेमा सदनलाई जानकारी दिए । गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै काँग्रेस र राजपाका सांसदले नाराबाजी गरेका कारण बैठक स्थगन भएको थियो ।
अघिल्लो लेखअध्यक्ष कै छोराले अनुचित काम गर्न दवाव दिएपछि गापा सचिव गायव
अर्को लेखकाठमाडौं फन भ्यालीले कर छलेपछि राजश्वले मार्यो छापा, पौडी पोखरीमा दुषित पानी !
उपचुनावमा पैसा बाँड्ने तत्वको पैसा कब्जा गर्न पूर्व उद्योगमन्त्री बस्नेतकाे निर्देशन
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपचुनावमा लागि ६५ उम्मेदवार
हिउँदे अधिवेशनसँगै आवश्यक ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी